Xalka qolka qabow ee caadiga ah
Heerka Xalka Qolka Qabow Qolka qabow waa meel lagu keydiyo wax soo saarka beeraha ee haynta cusub. Shaqadeedu waa inay ilaaliso xasilloonida deegaanka heerkulka hooseeya. Waxqabadka kuleylka kuleylka badanaa waa ...
Qolka qabow ee khudradda iyo khudradda
Qolka Qabow ee Loogu Talagalay Khudradda iyo Khudaarta Cabbirka heerkulka ee qaraha iyo bakhaarrada keydka ah ee miro-dhalinta guud ahaan waa 0-8 ℃. Heerkulkaani wuxuu daboolayaa deegaanka keydinta ku dhowaad dhammaan qaraha iyo miraha. Waqtiga keydinta waa abo ...
Bandhigga Ningbo 2019
Bandhigga Ningbo ee 2019 Si loo sii ballaariyo suuqyada gudaha iyo dibedda, loo xoojiyo kobcinta tamarta qorraxda iyo qalabka qaboojiyaha ee shirkadda, ballaarinta dhoofinta wax soo saarka, isla mar ahaantaana hoosta ka xariiqda ...